Ubume beVirgo Earth Element - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nophawu Lomntu
Uhlobo lweVirgo luchaphazeleka kakhulu kumhlaba olawulayo. Ngokukodwaiimpawu zobuntu, iimvakalelo, imiba yezempilo, kunye nokuhambelana nezinye iimpawu zodiac zilawulwa kakhulu ngamandla omhlaba.
Impembelelo yoMhlaba oPhezulu kuBuntu beVirgo
IVirgo isekwe kumandla okuqonda kunye nokusebenza. Eziiimpawu zityhilaimiyalelo ebaluleke kakhulu kubomi beVirgo kwaye ikhokele indlela eyiyo kwiingxaki, imiceli mngeni kunye neemeko ezingalindelekanga.
Ingqondo kwiTaurus Earth Element
Imibala kunye neempawu zeZinto ezine zodidi
Iimpawu eziNyukayo zeVirgo kunye nefuthe
Amandla omhlaba adibanisa iVirgo ngemithetho efanayo kunye nenkqubo elawula indalo. Olu lwakhiwo ligcina umjikelo wobomi ngokulandelelana kwaye iVirgo ifumana intuthuzelo kolu luhlobo. Ngapha koko, iVirgo izabalazela ukulinganisa le ndlela inye ebomini babo, inxanelwe ulungelelwano, ukulingana kunye nokugqibelela.
Indawo efanelekileyo yokuthatha umhlalaphantsi eCalifornia
Ukufezeka yeyona njongo
IVirgo ihlala inenjongo ephambili, igqibelele nantoni na eyenziweyo. Le njongo isetyenziswa kuyo yonke into eyenziwa yiVirgo. Ingaba yiprojekthi enkulu okanye into elula njengokucoca igumbi. IVirgo isondela kubomi ngokungathi ligumbi lokufundela apho izakhono nolwazi zinokufunyanwa kwaye ziphuculwe khona.
Uxanduva kwaye luxhomekeke
Njengophawu lomhlaba, iVirgo inoluvo loxanduva ngaphakathi. Esi sikhokelo siquka ukuba ngumntu onokuthi axhomekeke kwabanye kwaye bathembele kuye. Oku kunokuba kwindima yeqabane, umntakwenu, umzali, okanye njengomntwana kumzali. IVirgo ihlala iziva ngathi inyanzelekile kunye noxanduva kusapho nakwizihlobo.
IVirgo ayisiyiyo iRisk Taker
Isixhobo somhlaba sithintela iVirgo ekubeni ithathe umngcipheko. Ngapha koko, uVirgo uhlala enqaba ukwenza nantoni na engeyiyo into eqinisekileyo. Uloyiko lokusilela sesona sizathu sangaphandle sokuba kutheni iVirgo ingazibeki emngciphekweni. Nangona kunjalo, olo loyiko alukho ngokusilela, kodwa isiphumo siya kuba sesingaphelelanga. Kwaye, iVirgo ayinakunyamezela ukwenza nantoni na ngokungafezekanga.
Inquma eliya kweliphi icala phambi kokuthweswa isidanga
Ubukrelekrele kunye nefuthe lomhlaba
Njengomzala kaVirgo, iTaurus, olu phawu lomhlaba luyinto yenyama kwaye luyabulela izinto ezisemgangathweni. Ngokungafaniyo neTaurus, iVirgo ayijolisanga kuyoimali nobutyebi, kakhulu njengokuthuthuzela kunye nozinzo. UVirgo ufuna ikhaya elimiselwe ngokugqibeleleyo kwaye lihlala licocekile, licwangcisiwe kwaye licwangcisiwe.
Element Earth kunye Chaos
Into yomhlaba ihlala ifuna ukulingana. Isiphithiphithi okanye izidubedube ziphazamisa kakhulu inqaku leVirgo yomhlaba. Ngapha koko, iVirgo ithintela ukungqubana kuba ukungaboni ngasonye nangaluphi na uhlobo kufana nenyikima kwiVirgo psyche.
IVirgo kunye neMpilo yoMhlaba
UVirgo ulawula indlu yesithandathu ejongene nempilo yomzimba. Yindlu apho kufuneka indlela yokucinga kunye nokuqiqa. IVirgo iyazi ngokukhusela impilo yayo kunye nokuzigcina ucocekile.
Iingxaki zeVirgo zezeMpilo kunye neemvakalelo
Indawo enye exhalabisa iVirgo yindlela yokugaya ukutya, ngakumbi isisu kunye namathumbu. I-Virgos zithambekele ekuphazamiseni isisu. Isixhobo somhlaba siguqulela iimvakalelo ngaphakathi nangaphantsi, ke inkqubo yokwetyisa iba yindlela yokucocaukuphazamiseka ngokweemvakalelo.
Uninzi lwamaLungu asemngciphekweni
Amalungu ahlala echaphazeleka yipancreas kunye nedlala lengqula. I-Virgos ithambekele ekubeni nolwazi ngempilo, ngakumbi ngokutya kwabo, ngenxa yoko banamajoni omzimba omeleleyo kwaye abafane bagule.
indlela yokubeka kwakhona i-zipper
IVirgo Earth Element kunye neZodiac Signs ezihambelanayo
Kukho umdlalo ogqwesileyo weVirgo esekwe kwizinto ezilawula ezinye iimpawu zodiacac. IVirgo inokufumana iqabane kwenye iVirgo ukuba banokuyinyamezela imfuno yomnye nomnye yokugqibelela. Lo mdlalo unokumiselwa ukuba uphile ixesha elifutshane.
IVirgo kunye nezinye iiMpawu zoMhlaba
ICapricorn okanye iTaurus inokwenza umdlalo olungileyo womhlaba. IVirgo inoxabiso olunzulu ngokungafuni kwenkunzi ukutsiba kwenye into ngaphambi kokulinganisa onke amacala emeko. IVirgo iya kuyithanda imeko ebonakalayo yeCapricorn yokukhetha ukubeka imali kwiakhawunti yokonga endaweni yokuyichitha kwikhefu elinobunkunkqele.
Iimpawu zeVirgo kunye naManzi zeZodiac
Xa uVirgo edibana nomqondiso wamanzi, kunokuba njaloukuthanda umntu ukuqala ukumbona. I-Pisces, i-Scorpion, ne-Cancer zonke zifuna ukhuseleko lwekhaya kunye nendawo ekhuselekileyo. IVirgo yabelana ngale mfuno. Isixhobo samanzi siya kukondla isiqalelo somhlaba kwaye isiqalelo somhlaba siya kukhusela kwaye sinike ifom yamanzi. Ezi zinto zimbini zinohlobo lonxibelelwano.
Iimpawu zeVirgo ezingahambelaniyo
I-Virgo earth element ayihambelani kakhulu nomlilo okanye iimpawu zomoya. I-Aries, i-Leo kunye ne-Sagittarius, iimpawu zomlilo zihamba ngokukhawuleza nangokungakhathali kwinto yomhlaba, zihlala zivutha iibhlorho kwaye zithatha umngcipheko omkhulu. Iimpawu zomoya zivusa uthuli oluninzi kwiVirgo. Iimpawu zomhlaba zisoloko zishiyekile zihlikihla amehlo abo bezibuza ukuba kwenzeka ntoni kanye kanye nalapho i-Gemini, i-Aquarius okanye iLibra ihambileyo.
Ibhalansi yeNdalo yeVirgo Earth Element
Isixhobo somhlaba weVirgo sihlala sifuna indlela yokuphucula kunye nokugqibelela. Ngaphakathi kulo mzabalazo wokufezekisa okokugqibela, owona mceli mngeni mkhulu weVirgo kukufumana ulungelelwaniso ebomini.
Ikrismesi Iincwadi Ne Iifilimu Malunga Ikrisimesi Imisebenzi Yolutsha Cheerleading Slideshows Plus Size Formal Clothing
ingakanani imali onokuyinikela kwisikolo esiphakamileyo se-2020
Amele ntoni amanzi kwi-feng shui
uyifumana njani isosi yepitsa ekhaphethini
indlela yokucoca umgexo wesilivere obalaseleyo
ukuba uzothini kusapho xa umntu esifa